सांसद विमला खत्री लाई मुख्यमन्त्री कार्यालयाले बन्धक बनाएको खुलासा, यस्तो छ रहस्य ! — Imandarmedia.com
सांसद विमला खत्री लाई मुख्यमन्त्री कार्यालयाले बन्धक बनाएको खुलासा, यस्तो छ रहस्य !
काठमाडौँ। लुम्बिनी प्रदेशकी सांसद विमला खत्री वली नेकपा माओवादी केन्द्रमा फर्किएकी छन्। साउन १५ गतेदेखि उनी सार्वजनिक कार्यक्रममा देखिएकी थिइनन्। आज बुटवलमा नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेश संसदीय दलले पत्रकार सम्मेलन गर्दै वली माओवादीमै सक्रिय रहेको जानकारी दिएको छ।
वलीले गत साउन १६ देखि २० गतेसम्म आफू मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट बाहिर निस्कन नपाएको बताएकी छन्।मुख्मन्त्री शंकर पोखरेलसँग भेट भई छलफल सुरू भयो। फेरि उही दवाव सुरू भयो नेकपा एमालेमा आउनुपर्यो । पहिले हाम्रो गल्ती भयो, अब त्यस्तो हुँदैन, पार्टीमा आउनुस् मन्त्री बन्नुस् भनेर विभिन्न प्रलोभन देखाइयो। मैले निरन्तर इन्कार गरिरहेँ।
साउन १६, १७, १८ गतेसम्म मुख्यमन्त्री निवासबाट बाहिर निस्किनै नदिई निरन्तर दवाव दिइरहियो, मैले इन्कारी जारी राखिरहें,’ उनले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेकी छन्, ‘साउन १८ गते विज्ञप्ति लेखेर मलाई पढ्नै नदिई जबरजस्ती हस्ताक्षर गराइयो, यति मात्र नभई अर्को दुई तीनवटा माइनटजस्ता रजिष्टरमा पनि जबरजस्ती हस्ताक्षर गराइयो। यति घटना गराइसकेपछि अब मलाई घर जान दिन्छन् र बाहिर गएर यो जबरजस्तीको खण्डन गर्छ भनेर सोचेको थिए, तर अझ कडाइका साथ साउन १९ गतेदेखि मुख्यमन्त्री निवासभित्रै राखियो।
२० गते बिहान मलाई असह्य मानसिक पीडा भयो, यहाँबाट जसरी पनि निस्कनु पर्छ भनेर सोच बनाएर समय र परिस्थिति हेरी म आज जसरी पनि निस्कनु पर्छ भनेर तयारी गरेँ।’आफू मुख्यमन्त्री निवासको ट्वाइलेटको चप्पल लगाएर माओवादी संसदीय कार्यालय पुगेको पनि उनले बताएकी छन्।
यसअघि उनी नेकपा एमालेमा क्रियाशील रहेको विज्ञप्ति आएको थियो। तर उनले आफूलाई साउन १८ मा विज्ञप्ति पढ्न नदिई त्यसै जारी गरिएको दाबी गरेकी छन्।उनी गत निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाबाट उम्मेदवार भई बिजयी भएकी थिइन्। फागुन २३ मा सर्वोच्चबाट फैसला भएपछि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र पुन: अस्तित्वमा आएका थिए।वली माओवादीमा क्रियाशील हुने भन्दै माओवादी संसदीय दलको बैठकमा भागसमेत लिइसकेकी थिइन्।